Page3of 3	41. ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ အရောင်တင် မှုန့်တွေ ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်း ရမည်	(2016)
... သိမ်းဆည်းဖို့ နဲ့ ထပ်မံတွေ့ရှိရင် အရေးယူသွားမယ်လို့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား... စျေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနေတဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ အရောင်တင်မှုန့်တွေမှာ ...	Created on 12 November 2016	42. အကျဉ်းထောင်နဲ့ အကျဉ်းသား အရေး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေ တိုက်တွန်းပြောကြား	(2016)
... မြန်မာပြည်က အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ နှိပ်စက်မှု၊ ပိတ်လှောင်ထားမှု၊ သောက်သုံးရေ မသန့်ရှင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပုံ ချို့တဲ့မှု... ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် AI ခေါ် နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က ...	Created on 11 November 2016	43. Smart ဖုန်း ရောင်ခြည် ကျန်းမာရေးထိခိုက်	(2016)
လက်ကိုင်ဖုန်း၊ Tablet ကွန်ပြူတာ ပစ္စည်းတွေက ထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကို ကြာကြာ ကြည့်တာက လူကြီးနဲ ့ကလေးတွေရဲ့ အိပ်ပျော်နိုင်မှုအရည်အသွေးကို ထိခို်က်နိုင်တယ်လို့သုတေသန စာတမ်း ၂ ခုမှာ မကြာခင်က အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 11 November 2016	44. နှလုံး ပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းရေး	(2016)
နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆ - နှလုံးပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းရေး အစီအစဉ်မှာ ဘယ်လို လုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လောက် အချိန်ယူလုပ်ရကာ၊ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါလဲ။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆ - နှလုံးပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းရေး ...	Created on 10 November 2016	45. မြေယာပြန်ရဖို့နဲ့ စက်ရုံတွေ ပိတ်သိမ်းဖို့ ထီးချိုင့်မှာ ဆန္ဒပြ	(2016)
... ဦးထင်ကျော် ကျန်းမာပါစေ စတာတွေကို ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ Authors: လွတ်လပ်သော အာရှ အသံ Read more http://www.rfa.org/burmese/news/kathar-farmers-protest-11102016061805.html ...	Created on 10 November 2016	46. မြန်မာ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပုံစံသစ်	(2016)
နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၆ - အမျိုးသားလွှတ်တော် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းဝင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစံရွှေဝင်းတို့ကို ဗွီအိုအေဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း ...	Created on 07 November 2016	47. ဇီကာအန္တရာယ်	(2016)
မြန်မာနိုင်ငံ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကူးစက်ခံထားရသူတယောက်ရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဌာနက အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ဇီကာ ကူးစက် ပျံ့ ပွားမယ့်အပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံထဲမှာပထမဆုံး ရောဂါကူးစက်မှုသတင်းနဲ့ ...	Created on 06 November 2016	48. အဆုတ်ကင်ဆာ ကာကွယ်နိုင်ဖို့	(2016)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ကြရတဲ့ အဓိက အကြောင်းက ဆေးလိပ်သောက်ကြတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆုတ်ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ် နေထိုင်နိုင်မယ့် အကြောင်းအချက်တွေကို ဒေါက်တာသန့်ဇော်က လူထုနဲ့ကျန်းမာရေး ...	Created on 06 November 2016	49. မြန်မာ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခြေအနေ	(2016)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ အသုံးစရိတ်၊ ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပုံစံတခု ရလာရေး စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်း၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဌ ...	Created on 03 November 2016	50. ဂရုစိုက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ ဆီးချို၊ သွေးချို	(2016)
... သက်တမ်းစေ့နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂရုတစိုက် နေထိုင်စားသောက်သင့်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ဒေါက်တာသန့်ဇော်က လူထုနဲ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာ တင်ပြထားပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ Read more http://burmese.voanews.com/a/3570581.html ...	Created on 30 October 2016	51. ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒေသန္တရ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ပေးမည်	(2016)
... အသက် ၃၅ နှစ်ထက်မကြီးသူ၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူဖြစ်ရ မှာဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူတွေကို ရဲသင်တန်းပေးပြီး လက်နက်အပြည်အစုံနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပဲ တာဝန်ချထားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်နဲ့ ...	Created on 30 October 2016	StartPrev123NextEnd